Maraykanka Oo Xasuuq Wuxuushnimo ah ka geystay Afqaanistaan. – Shabakadda Amiirnuur
Maraykanka Oo Xasuuq Wuxuushnimo ah ka geystay Afqaanistaan.
November 7, 2018 9:34 am by admin Views: 44
Ciidamada Maraykanka oo hormuud u ah shisheeyaha duulaanka gardarada ah ku jooga wadanka muslimka ah ee Afqaanistaan ayaa ku kacay xasuuq wuxuushnimo oo aad u xanuun badan, kaas oo ay u geysteen shacabka muslimka ah ee ku nool wadankaas.
Sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo wadanka Afqaanistaan, ciidamo Maraykan ah oo ay wehliyaan malleeshiyaad katirsan xukuumadda Kaabul ayaa weerar kuqaaday degmada Jayaan ee wilaayada Baktiika, halkaas oo ay ku dileen inkabadan 20 ruux oo ay ku jiraan dumar iyo caruur.
Ciidamada Maraykanka ayaa xilli saq dhexe ah waxay kusoo degeen suuq weyn oo ku yaala bartamaha magaalada, waxaana markaas kadib ay jabsadeen dukaamada, iyagoo ka qaatay wixii lacag iyo hanti ee tiillay, waxaana markaas kadib ay burburiyeen xarumaha ganacsiga.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya in markaas kadib ay ciidamada Maraykanku kusoo faafeen xaafadaha ka dambeeya suuqa, halkaas oo ay deganyihiin dad shacab ah, waxayna si bareer oo ula kac ah u dileen ugu yaraan 21 ruux, oo ay kamid yihin 5 dumar ah iyo 3 caruur ah.
Warar la helayo ayaa xaqiijinaya in dhamaan dumarka iyo caruurta ay dileen ciidamada Maraykanka ee 8 ruuxa gaaraya ay kasoo jeedeen hal qoys ah oo lagu magacaabo Reer biir Axmed, taas oo ah arin xanuun badan oo murugteeda leh.
Si joogta ah ayay ciidamada Maraykanka gumaad iyo falal wuxuushnimo ah kula kacaan shacabka muslimka ah ee Afqaanistaan, waxaana la yaab leh in hay’adaha sheegta xuquuqda insaanka ee hoostaga Qaramada midoobay aysan marnaba ka hadlin falalkaas lagu dilo tobanaanka ruux, maadaama qofka geysanaya dhibkaas uu yahay Maraykanka.